Vaovao - Famonoana ranomandry famonosana mangatsiaka mangatsiaka fitsaboana ranomandry cryo
Ny tantaran'ny fitsaboana mangatsiaka dia nanomboka tamin'ny 2500 talohan'i JK, rehefa nampiasa mangatsiaka (cooling) ny Ejipsianina mba hitsaboana ratra sy mamaivay.
Na marary sitrana aorian'ny fandidiana ianao na atleta sangany amin'ny ratra ara-panatanjahantena, te-hiverina amin'ny laoniny haingana araka izay tratra ianao.
Tsy ampy ho anao ny fanasitranana passive.Te ho mavitrika amin'ny fanasitranana ianao ary hanafaingana ny fahasitranana.
ny-BARY (fitsaharana, sery, fanerena, fiakarana) no fomba fitsaboana mahazatra indrindra amin'ny ratra amin'ny tavy malefaka.Mampiasa an'io fitsipika io ny fonon'ny famatrarana mangatsiaka, manamboatra endrika vaovao, manambatra ny famatrarana mangatsiaka sy ny famatrarana eo an-toerana, ary mahatratra ny vokatra tsara indrindra amin'ny fitsaboana mangatsiaka sy ny fitsaboana.Ity fomba ity dia tsy tsotra fotsiny ny miasa, fa mahomby ihany koa.
Ny fitsaboana mangatsiaka dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny areti-maso sy ny edema ary manamaivana ny fanaintainana vetivety, mahatonga ny fahasitrananao haingana sy mahazo aina kokoa.Ny gel novolavolaina manokana dia afaka manome fotoana mangatsiaka mangatsiaka kokoa, ary ny fonosana gilasy gel dia natao miaraka amin'ny famehezana roa, tsy misy leakage ary azo antoka kokoa ny fampiasana;
Ny fanerena dia afaka manafoana tsara kokoa ny fivontosana eo amin'ny faritra maratra, mampiroborobo ny fikorianan'ny ra, ary mahatonga ny fiantraikan'ny fitsaboana mangatsiaka hiditra lalina kokoa.Azonao atao ny mifehy ny tsindry ilaina amin'ny alàlan'ny fanindriana sy ny famoahana ny baolina fanerena rivotra, izay tena mety;
Ny fanerena miato dia manampy ny vatana hanala ny fivontosana amin'ny fampiroboroboana ny fikorianan'ny rà amin'ny fomba mahomby kokoa noho ny fanerena mitohy.Ary ny famolavolana dia manambatra ny tombony amin'ny fitsaboana tsindraindray sy ny fitsaboana compresses mangatsiaka mba hanamafisana ny fiasan'ny fanarenana ny vatana, hampiroborobo ny fikorianan'ny rà, ary hanampy amin'ny famporisihana ny tavy hanamboarana haingana sy tsara kokoa.
izanyfonosana famatrarana mangatsiakadia ahitana pad raikitra, balaonina misy tsindry ary vatana kapsule.Ny vatan'ny kapsule dia natao araka ny anatomie, izay mety tsara kokoa amin'ny tonon-taolana sy ny ampahany amin'ny vatan'olombelona;mety amin'ny fampiasana amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana izy io ary mitondra vokatra fitsaboana tsy ampoizina ho an'ny marary.
Misy faritra 8 misy ranomandry azo isafidianana, ao anatin'izany ny soroka, kiho, tanana, lamosina, fe, lohalika, zanak'omby ary kitrokely.
manambatra nyfitsaboana mangatsiakamiaraka amin'ny fanerena hanafaingana ny fanarenana amin'ny fanaintainana, ny fivontosana ary ny mamaivay;
Mifehy ny famatrarana amin'ny ambaratonga tianao amin'ny fanindriana fotsiny ny takamoa paompy;
Mijanòna mangatsiaka kokoa miaraka amin'ny gel manana fiasa avo lenta misy sosona insulation manokana;
Namboarina ho mateza sy tsy misy leak miaraka amin'ny ivelany nylon voaisy tombo-kase sy pvc-coated;
Tanjona ho an'ny mifanaraka amin'ny endrika anatomika sy tady azo amboarina.
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia mifandraisa aminay: